Geeri ama Nolol: Tababaraha Liverpool Oo Ka Hadlay Waxa Uu Jamaahiirtiisa Anfield Ka Doonayo Kulanka Napoli Ee UCL | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
(11-12-2018) Kooxda Liverpool ayaa Anfield ku soo dhawayn doonta dhigeeda Napoli, waana kulan uu culayska oo dhami saaran yahay garbaha kooxda Jurgen Klopp ee Liverpool kadib labadii guuldaro ee xidhiidhka ahaa ee ka soo gaadhay kooxaha Red Star iyo PSG. Liverpool ayaa ku qasban in ay Napoli guul ka gaadho haddii ay doonayso in ay u soo baxdo wareega 16ka Champions league wuxuuna Jurgen Klopp ka hadlay waxa ay kooxdiisa Reds uga baahan tahay jamaahiirta Anfield.
Liverpool ayaa taariikh layaableh ku haysata garoonkeeda Anfield, waxayna noqon doontaa habeen kale iyo kubbada cagta Yurub oo uu Anfield marti galin doono kulan si cad wax u go’aamin doona. Napoli ayaa Anfield iskeeni doonta iyada oo hogaaminaysa Group C halka Liverpool ay kaalinta saddexaad u dhacday inkasta oo ay hore hogaanka u haysay, waxayna Reds u baahan tahay in ay guul gaadho si ay Napoli ama PSG meesha uga saarto. Napoli waxaa ku filan barbaro kaliya laakiin sidoo kale PSG oo marti u noqon doonta kooxda Red Star Belgrade ayaa dagaal ugu jirta ay u soo baxdo
wareega 16ka Champions League. Jurgen Klopp oo ka hadlaya waxa uu jamaahiirta kooxdiisa Liverpool ka doonayo ayaa yidhi: “Waxaanu ognahay sida uu jawigu u waynaan karo, waxaanan ku rajo waynaha in aan taas arko. Wax walba markale ayaanu u samynay si aanu tartankan ugu soo baxno, waxaanu ognahay in aanu haysano fursad aanu ugu soo bixi karno natiijo gaar ah inksta oo aanu xili ciyaareedkan Champions League-gu aanu kaayagii wali ahayn”.
Klopp oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Anigu waxaan aaminsanahay in aad helayso waxa aad u qalanto. Anigu waxaan ku fiicanahay in kulankani yahay guulaystaha ayaa wax walba qaadanaya. Haddii aanu u fiicanahay in ku filan, waxaanu heli doonaa natiijada aanu u baahanahay, kadib haddii kale waxaanu u hambalyayn doonaa Napoli iyo PSG”.